Bakka hojiitti sillimiin hirribaa eeyyamamuu qabaa? - BBC News Afaan Oromoo
Bakka hojiitti sillimiin hirribaa eeyyamamuu qabaa?
Image copyright AXEL SCHMIDT
Mootummaan Ameerikaa bakka hojiitti yeroo gabaabaaf hirriba rafuu dhorkeera. Ogeessoti garuu qajeelfamni kun amma geeddaramu qaba jedhu.
Kanaan dura hojjettoota mootummaaf bakka hojiitti rafuun akka waan gaaritti ilaalamuu baatuus hanga ammatti seeraan ifatti dhorkaamee hin turre.
"Namni kammiyyu gamoo federaalaa keessatti rafuun dhorkaadha, yoo angaa'aa waajjira saniin eeyyama argatan irra kan hafe, " jedha qajeelfamni ji'a kana Bulchiinsa Tajaajila Biyyaleessan kenname.
Qajeelfama kana baasuuf aanga'oota maaltu akka kakaase ifa miti - isaanis deebii hin kennine - ta'us garuu mootumman tokko hiribba hojjettoota irratti aggaamatu dhorkuun kun yeroo jalqabaaf miti.
Bara 2018 keessatti Waajiiri Ooditii Bulchiinsa Kaaliforniyaa hojjettu Muummee Koonkolaattota lafa hojiitti guyyaatti gara sa'aatii sadiif raftu irratti gabaasa baasee ture. Akka gabaasa kanaatti hirribni dubartii kanaa waggaa afur keessatti bulchiinsa sanatti kasaara gara doolaaraa 40,000 fideera.
Goodayyaa suuraa Hasaa Obamaan taasisa ture irratti Hadhi Seeraa Mana murtii Olaanaa Ruut Bader Ginsibarg yeroo mugdu argamteetti.
Yaadni hojjattoonni lafa hojiitti rafuu jedhu namoota hedduu naasisuu danda'a, mormiin hojjettoonni lafa hojiitti yeroo gabaabaaf rafuu jedhu garuu omishummaa isaani guddisuu malee baleessu irratti kan xiyyeeffatu miti.
Pireezdaantii Mana barumsaa Yaalii Hirribaa Ameerikaa kan turanii fi Daariktera meedikaala Hirriba Kilinikaa kan ta'an Dr Lawrans Eepistiin Ameerikaa keessatti lammileen gara miiliyoona 70 ta'an dhibee hirribaan akka rakkatan tilmaamu.
Qorannoon dhiyeenya Yunivarsitii Indiyaana Baal Isteet irraa maxxanfameefi gabaasa yeroo hirribaa namota 150,000 ta'an irraa sassabeen hojjatame, lakkoofsi namootni guyyaatti sa'aattii torba rafanii bara 2010 tti %30.9 irra bara 2018tti % 35.6 ga'eera.
Namoota qorannicha irratti hirmatan walakkan isaanii poolisootaafi hojjetoota damee fayyaa kan ta'an hirriba ga'aa akka hin arganne gabaafameera.
"Dhaabbileen hedduu rakkoo kana hubatanii maloota ittiin furan irratti hojjachaa jiru. Dhabbileen mootummaan keenya garuu rakkoo kana irratti hojjachaa waan jiran natti hin fakkaatu," jechuun Eepistiin BBCtti himaniiru.
"Kun dhimma hubatamuu danda'ufi qabu ta'ee utuu jiruu yeroo baay'ee garuu hin hubatamne dha."
Hirriba dhabuun namoota irratti rakkoo fayyaa fiduu danda'a - dinaagdees ni miidha.
Maloota shan fayyaa sammuu ijoollee foyyeessuuf gargaaran
Abbaan seeraa otoo rafuu dhaddacha irraa hafe hidhaa bu'e
Hirriba dhabuun rakkoo fayyaa kan akka, furdina garmalee, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba lapheefi istrookii fiduu dabalatee dhibee xiinsammuu kan akka ansaayitii fi dipreeshinii fiduu danda'a jedhama.
Bara 2016tti qorannoon Rand Korporashiniin gaggeefamme rakkoon hojjattoota hirriba dhabanii dinagdee Ameerikaa irratti, omishaa hir'isuu dabalatee waggaatti kasaaraa doolara biiliyoona 411 fida.
Eepistinii fi oggeessooti biroo yaada hojjattoonii yeroo gabaabaaf lafa hojiitti rafuu qabu jedhu deeggaru.
"Namootni hirriba dhaban hojiisaani sirritti hin hojjatani, balaa lafa hojiitti uumaamuufis madda ta'uu danda'u. Rakkoo fayyaa dabalataa waan qabaataniif immoo dhaabbileen isanii maallaqa caalatti baasaa adeema," jedhu Eepistiin
Biyyootiin biroo hiribba lafa hojii irratti ilaalcha biraa qabu. Jaappaan keessatti hojjattoonnii sa'aatii dheeraaf hojjatan yeroo gabaabaaf hirriba akka argatan jajjabeessuuf dhaabbileen kutaa sagalee hin galchiine addaa ijaarutti jiru.
Yaadni kun suuta ta'us fudhatamuu eegaleera.
Kaampaniiwwan kan akka, kampanii ayis kiriimpi 'Ben & Jerry's' kutaa hirribaa qopheessanii qabu.
Goodayyaa suuraa Kutaa hirribaa wajjiira olaanaa Ben & Jerry's keessatti argamu
Hojjeettooni kun kophee isaanii baasanii daqiiqaa 20'f akka rafan ni eeyyamamaafi. Kunneen dhukubsatanii hirriba dabalataa fedhan immoo gara mana isaaniitti ergamu.
Dubbii himtuun Ben & Jerry's ilaalchi hamaan 'hojiirratti rafuu' garuu ammayyu akka jiruufi hojjetonni tokko tokko kutaa hiribbaaf yeroo mallatteessan maqaa sobaa akka fayyadaman ni himti.
Waggaa sadii keessatti yeroo afur qofa Kutaa Hirribaa kana kan fayyadamte hojjattuun Peetarsan jedhamtu "namootni bayyeen kutaa kana akka fayyadaman amanuu hin fedhani," jedha.
"Yeroo tokko tokko nan rafa, akkan darbaa hin rafneef ammoo bilbilakoorritti sa'aatii nan guutadha. Eeyyee kun boqonnaa gaariidha. oomishummankoos akka dabaletti natti dhaga'ama."
Hojjattoonni dhaabichaa biroo kanan walii galu.
Goodayyaa suuraa Meeshaan hirribaa MetroNaps hospitaalota, yunivasitiiwwaaniifi buufataalee xiyyaaraa keessatti ni argamu
Dhaabbileen Kaaba Ameerikaa tokko tokko ammoo hiribba daldala isaani godhataniiru.
Kan akka Dhaabati Kaanadaa 'Nap it Up' jedhamuu kutaa ciisichaa hojjatootaati daqiiga 25fi kutaa cisichaa doolara 7.6 akka kireeffataniif gargaara.
Dhaabni MetroNaps jedhamuu ammoo meeshaa akka siree kan ammayaa ta'e dhiyeessu. Meeshan kun hospitaalota, yunivasitiiwwaaniifi buufataalee xiyyaaraa kan heddumminaan hojjatoota sa'aatii dheeraa hojjetan biratti beekkamtii qaba.
Dhuguma hirribni hangas waan barbaachisaadhaa?
7 Guraandhala 2019
21 Caamsa 2019